Weebụsaịtị ka bụ ihe eji ego enweta ego | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị kwenyere na ihe niile ị gụrụ, ịmalite weebụsaịtị iji nweta ego na-akpata ga-abụ ihe furu efu ụbọchị ndị a. Ndị kwadoro asambodo ọnwụ ahụ na-ata oke asọmpi na mmelite Google dị ka ihe kpatara ọdịnala ọdịnala ọdịnala, site na azụmaahịa mgbakwunye, abụkwaghị isi iyi nwere ike ịme ego.
Agbanyeghị, ọ bụghị mmadụ niile natara akwụkwọ ozi ahụ. N'ezie, a ka nwere ọtụtụ ndị mmadụ na weebụ ndị na-eme ọmarịcha penny n'agbanyeghị na ego ha na-enweta na weebụsaịtị ha.
Etu E Si Enweta Ego Enweta na Weebụ
Investopedia na-akọwa ego na-abaghị uru dị ka nke “nke mmadụ na-enweta site na ụlọ ọrụ ọ na-anaghị arụsi ọrụ ike.”
Njirimara weebụ ghọrọ ezigbo ihe na-akpata ego na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ndị nwere ike ịmepụta peeji ole na ole nke ga-adaba na Google ma ọ bụ engines ọchụchọ ndị ọzọ. Na-adabere na nke a, ndị nwe saịtị ga-akwalite ngwaahịa dịka ndị mmekọ; ịkpata ego maka ndị ahịa ọ bụla ha zigara na saịtị ha bụ mgbakwunye. Ndị nwe ihe onwunwe weebụ ga-, site n'oge ruo n'oge, melite ụfọdụ content.
Ma oge agbanweela. Nwelite algorithm nke Google emeela ihe eji eme ka ndi mmadu ghara inweta ego ha choro na ntaneti n'ile ha. Ọtụtụ njikọ njikọ na mgbasa ozi mekwara ka ọtụtụ saịtị ndị a tufuo ọnọdụ ha n'etiti elu nsonaazụ ahụ. Enweghị ọkwa dị elu, ego a na-enweta site na saịtị ndị a akpọnwụwo.
Agbanyeghị, naanị n'ihi na otu ụdị ihe eji akpata ego anaghịzị arụpụta otu ihe apụtaghị na ubi ahụ anwụọla. N'ezie, a ka nwere ọtụtụ ụzọ nke weebụsaịtị na-arụpụta nnukwu nsonaazụ n'ụdị ego na-akwụ ụgwọ.
Ime Saịtị Weebụ Na-arụ Ọrụ na 2013
Laa azụ na 2012, Magazin Forbes gbara otu nke isiokwu ya bụ, “Isi Ihe Niile 4 Mere 'Enwe Ego Na-abaghị Adị' Bụ Ezigbo Egwu." N'ime ya, ha kọwara na ọ nweghị weebụsaịtị ọ bụla nwere ike ijide ma jigide ndị ahịa kpamkpam. A na-arụ ọrụ mgbe niile iji nọrọ n'ihu asọmpi ahụ. Ọ bụ ezie na nke a bụ eziokwu, echiche dị n’azụ ego na-akwụ ụgwọ nwere ike ịbụ nnukwu onye na - akpata ego - ọ bụrụ na websaịtị gị na - enye ozi ndị mmadụ chọrọ, ị nwere ike ịba uru. Nke ahụ bụ akụkụ na-agafe agafe, mana mmadụ ga-azụrịrị ahịa ma gbanwee ọdịnaya ahụ.
Na 1999, ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama aha Tim Timkes ruru ihe ruru $ 2 nde kwa ubochi site na klaasị na Mahadum Tulane. N'oge a, ọ na-ewere usoro nke mere ya ego ahụ wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ụlọ akụ na ụba na-eweta n'ịntanetị. Ya na umu akwukwo ya na emekorita, ya na ahia ahia ya ọdịnaya nke usoro ahụ abụghị ihe na-achọ mgbanwe dị ukwuu.
Achingkụziri onye bara uru, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala na-achọ, nkà bụ otu ụzọ isi mee ka ebe nrụọrụ weebụ ghọọ isi iyi nke ego.
Akwụkwọ akụkọ bụ ụzọ ọzọ ọtụtụ ihe nrụọrụ weebụ na-esi enweta ego. Ọ bụghị site na ụgwọ ndenye aha, mana site na mgbakwunye mmekọ.
Iwuli otutu ndi nwere mmasi nwere ike gbanwee uru a na-akwanyere ugwu. Mana ịmepụta ndepụta ahụ na-amalite site na ịnweta ntụkwasị obi nke ndị ọbịa na weebụsaịtị. Mgbe ha jiri ịnụ ọkụ n'obi na-eche maka ozi ndị ọzọ, ọ ga-abụ na ha ga-edenye aha ha n'akwụkwọ ozi ka elu. Akwụkwọ ozi ala, ọ bụrụ na ọ nwere ọdịnaya bara uru, enwere ike iji ya ree ngwaahịa site na mgbakwunye mmekọ.
Were DetuoBlogger.com, ọmụmaatụ. Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ede blọgụ na-agbaso saịtị a maka ozi banyere otu esi eme ka blọọgụ ha ka mma, na onye ọ bụla na-edebanye aha iji nata ozi site na ha na-ebute mgbe niile na onyinye nke ga-enyere aka nweta ego saịtị ahụ.
A pụkwara ikwu otu ihe ahụ maka pọdkastị, blọọgụ ma ọ bụ ụdị ntanetị ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụhaala na ozi ahụ bụ ezigbo aha ma nyere ndị mmadụ aka idozi nsogbu, ọ nwere ike ịbara ndị ọzọ uru.
Ebe nrụọrụ weebụ ka nwere ike ịbụ ezigbo isi iyi nke ego ma ọ bụrụ na ha nye ndị ọrụ uru n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ. Usoro ochie nke ijikọ ọnụ peeji ole na ole na-aba ọgaranya iji jikwaa ọchụchọ okporo ụzọ nwuru anwu, ma nke a abughi ihe ojoo. Zụ na ọgba aghara nke ụdị saịtị ndị a nyere naanị wepụrụ saịtị na-enye ihe ndị ọbịa ha nwere ike iji mee ihe.
Isi ihe ga-eme ka ihe gaziere gị bụ inye mmadụ ihe dị ya mkpa. A ga-enwerịrị ego ị ga-enweta na whenntanetị mgbe a na-eme echiche a dị mfe nke ọma.
Tags: -eme ka ego onlineonline ahịaego efuahịa weebụ
Sep 19, 2013 na 8:41 PM
Echere m na ọ bụrụ na anyị anwa anwa site na ego na-abaghị uru site na weebụsaịtị, mgbe ahụ anyị kwesịrị itinye oge, akụrụngwa na usoro aghụghọ iji dịrị mkpa. Nweta ọdịnaya bara uru, kpata ya ma wulite obodo. Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ hụrụ mkpọtụ na ọrụ n'ime saịtị.
Sep 20, 2013 na 7: 10 AM
Ekwenyere m na gị Larry! Ọ bụrụ na ịchọrọ ka azụmahịa gị nwee ihe ịga nke ọma, ọ dị mkpa na ị nwere websaịtị emebere nke ọma iji ree n'ịntanetị .Ọbụna obere, azụmaahịa mpaghara chọrọ ezigbo weebụsaịtị iji bulie ọhụụ na nrụpụta ọrụ ha.